ဘာသာရေးဆိုဒ်များ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အလင်းစက် အမှတ်တရလေးများ ဓမ္မဂင်္ဂါ ပန်းကမ္ဘာ ဓမ္မစေတမန် ဥပါသကာ ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) ဒေါင်းမင်း ဓမ္မဥယျာဉ် ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အရှင်လောကပါလ အရှင်ကေလာသ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒက burmaborn dhammavideo သစ္စာအလင်း အရှင်ဝိစိတ္တ(မနာပဒါယီ) ရွှေဝယ်သားလေး(မောင်းမကန်) ငြိမ်းအေးထွန်း တောင်ခရီးသည် ထွန်းထွန်းလှိုင် ဦးသုမင်္ဂလ ၀ီရဓမ္မ ဓမ္မရံသီ အရှင်အာစာရ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း မော်ကွန်းသစ် livedhamma ကျိုက္ကလော့ဆရာတော် ဓမ္မရောင်ခြည် ဥယျာဉ်မှူးလေး နန္ဒသစ္စာ ပုဂံအလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် (တာချီလိတ်မြို့) ၀ါးချက်ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံ ကိုရင်လေး မဟာစည်ဝိပဿနာတရားတော်ပြန့်ပွားရေး မော်ကွန်းသစ် သီရိမင်္ဂလာ အလိုတော်ပြည့် M.TET တက္ကသိုလ်မြန်မာကျောင်းသားများ မြတ်ပန်းရဂုံ ဒဿနခရီး အရှင်ကုသလ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် အေးချမ်းလေး အဖြူရောင်မေတ္တာ စန္ဒာသူရိယ အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်) သစ္စာအလင်း shweparami ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက် အရိယာဝါသ ရုရှားဆရာတော် ဓမ္မမေတ္တာ ဓမ္မလက်ဆောင် အရှင်သာသန(မုံရွာ) ဓမ္မကုန်းမြေ minthantzaww နေမင်းအလင်း ပြည်တော်ဦး အလှတရား သစ္စာတရားများ စုဝေးရာ ပြတိုက်ငယ် ဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) တရားတော်များ ဒေါင်းရန် အရှင်ပညိဿရ တောက်ပကြယ်စင် အရှင်သိရိန္ဒ ပြည်တော်ဦး ယောအသင်း ဓမ္မင်္ဂါ သီတဂူစတား ထေရ၀ါဒလူငယ်များအသင်း ဓမ္မရသ သီရိမင်္ဂလာ ရွာဦးကျောင်း chinmg ကဗျာလက်ဆောင် နန်းရှင် အလှတရား အလင်းသစ် အနန္တမေတ္တာ ယနေ့ရေးသောတရားတော်များ မိုးကတ်တရားတော် အရှင်ဥတ္တမာနန္ဒ သဘာဝဓမ္မ thisismyanmar သာသနာ့ရောင်ခြည် http://www.mrmarga.co.cc/ ">ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အိမ် ချစ်သောကမ္ဘာမြေ မွေးရပ်မြေ အညာ သစ္စာရောင်ခြည် ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မပဒ ဓမ္မရသ ဓမ္မသုခ သုခရိပ် ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ဓမ္မရိပ် မင်းဝေ တိပိဋကမြန်မာပြန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကကြီးခကွေး ဗုဒ္ဓဟောကြား သူတော်ကောင်းတရား တရားတော်များ လူသားဗုဒ္ဓ ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင် မိုးကေ အရှင်ဝိသုတ-ရေနီ
ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် Weekly Eleven First Elevenဂျာနယ် ဘောလုံးပွဲအဖြေများ ရတနာပုံFC ESPN soccermyanmarဘောလုံးသတင်း
နည်းပညာဆိုဒ်များ ဘလော့တွေလေ့လာမယ် ဘလော့ဂ်အောက်ခံများအကြောင်း ဘလော့ဂ်အကြောင်း IT အကြောင်းဖတ်ရအောင် သံလုံငယ် နေမင်းခေတ်(နည်းပညာ) ရေခဲမင်းသား ညီနေမင်း ကျော်စွာငြိမ်း မိုးထက်မြင့် ပိုတိုရှော့လေ့လာချင်ရင် စာတမ်းတွေလေ့လာချင်ရင် မာကို့စ် ကိုဇော် မောင်ပညာ ပုံဂံသားမောင်ကျော် ကိုမြတ် ကိုရင်ပြည့်စုံ မောင်စေတနာ ကိုဇောင်း ကြယ်စင်မင်း သူရထွန်း ဂီတနဲ့နည်းပညာ ကိုရန်အောင် ဘုရင့်နောင်
Search Engine GooGle altavista yahoo MSN INFO
ကိုယ်ပိုင်freewebsiteလုပ်ရန် weeblyဖြင့်လုပ်ရန် YOLAဖြင့်လုပ်ရန် multiplyဖြင့်လုပ်ရန် Wallinsideနဲ့ဆိုဒ်လုပ်မယ် Wall.fm H Pageနဲ့ဆိုဒ်လုပ်မယ် Sitetubeဖြင့်လုပ်ရန် Blogdavidဖြင့်လုပ်ရန် wordpress blogspot Webnodeဖြင့်လုပ်ရန် Jigsyဖြင့်လုပ်ရန် Jjmdoဖြင့်လုပ်ရန် Edicyဖြင့်လုပ်ရန် Dinkypage Googleဖြင့်လုပ်ရန် Flash web site
ရေဒီယိုနားဆင်၇န် MYMC ဗုဒ္ဓFM City FM အဖြူရောင်သံစဉ် 951streetfm ရွှေFM
50+ Social websites (FREE)
GROU.PS | Powerful Groups for the New Social Era GROU.PS is your new online community site creator! World's Largest Free White Labe...
Webnode ဖြင့် Websiteပြုလုပ်နည်း
Website ပြုလုပ်နည်းတခု ဆက်လက် ရေးသားပရစေ Freeဖြစ်ပေမယ့် ပထမဖော်ပြခဲ့တဲ့ Wix လောက် Full Controlမရပါဘူး Ok စရအောင် ဒီနေရာကို ကလစ်ပါ ...
How to hackaFacebook account Free +
1-အရင်ဆုံး ဟက်ချင်တဲ့သူရဲ့ user name နဲ့ fri name ကို သိအောင်လုပ်ပါ= email address & username 2-ပြီးရင်တော် ,go to facebook.c...
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Facebook ပေါ်မှာ အကောင့်ဖျက်ချင် Fri disable လုပ်ချင်တဲ့သူတယောက်တွေ့လို့ပါ အဲသူကိုအကောင့်မဖျက်ပါနဲ့လို့ သူများတွေ ဟက်...
အခုပြောပြမယ့် ဆိုဒ်လုပ်နည်းကwix ဆိုတဲ့ Free Hostကနေလုပ်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ် ဆိုဒ်ကို Publishလုပ်ပုံ အထိဘဲ ရေးသားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်နည်းတွေကိ...
sign to blogger
Website ပြုလုပ်နည်းတခု ဆက်လက် ရေးသားပရစေ
Freeဖြစ်ပေမယ့် ပထမဖော်ပြခဲ့တဲ့ Wix လောက် Full Controlမရပါဘူး
Ok စရအောင် ဒီနေရာကို ကလစ်ပါ
ပေးထားတဲ့ Forumကို အရင်ဖြည့်ပြီး Sign Upလိုက်ပါ ဒီအဆင့်က တော့ ဘယ်ဆိုဒ်မဆိုလိုမှာပါ User အသစ်ပြုလုပ်တာဘဲလေ ကျနောကတော့ Userဖြစ်ပြီးသားမလို့ Sign in၀င်လိုပါမယ်
ကျနော်က Webnodeရဲ့ Userဖြစ်ပြီးသားမလို့ ဒီအဆင့်ကို တမ်းရောက်တာပါ ခဗျားတို့တော့ အဆင့်နည်းနည်းဖြတ်သန်းရပါ လိမ့်ဦးမယ် အခုပုံပါ အဆင့်ရောက်ရင် manage websiteကို ကလစ်လိုက်ပါ
Start to edit ကို ထပ် Click ပါ Clickမလုပ်ခင် Side Barမှာပြထားတဲ့ ကျနောတို့ ရရှိမယ့် webnodeရဲ့ အခွင့်လမ်းတွေကို အရင် ဖတ်ကြည့်ပါ ကလစ် လုပ်ပြီးရင်တော့ မိမိ ရွေးထားတဲ့ Templateနဲ့အတူ မိမိရဲ့Websiteကြီး ထင်းထင်းကြီး ကို ပြုးပြင်ရန် စတင် မြင်ရပါပီ
1. Site Editing Menu
ကျနော် တို့ websiteအတွက် Contentအသစ်ထည့်တာ(Text,Picture,Poll,etc...)
Templateပြောင်းတာ Fornt Style Changeတာ Header,Footer,Site back Groundပြောင်းတာတွေကို လုပ်မယ်ဆို အသုံးပြုနိင်ပါတယ်
Menuဆိုတာ Website တခုမှာ ပါဝင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း Navegation barတခုပါ။
ထို Menu Barမှာ Page အတိုးအချဲ့ ၊ External Webpage တွေကို Link ချိတ်ရာမှာ အသုံးပြုနိင်ပါတယ်
3. Body Content Edit
Webpage တခုလုံးမှာ No3.ကဲ့သို့သော် Setting keyလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ထို keyကို Clickပြီး text paragraphတွေ Photoတွေကို ပြုပြင်ရေးသားနိင်ပါတယ်
Website Editလုပ်ချင်း ရပ်နားဖို့အတွက်ပါ Website Auto Save ပါ
အခုဆက်ပြီးတော့ websiteအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Menu Bar ကို ပြင်ကြရအောင်
Pageတခုကို ပြင်မယ် ဖျက်မယ် အပေါ်အောက်နေရာရွေ့တာတွေကို ပြုလုပ်နိင်ပါတယ်
Passwordချနိင်သလို Search Engineတွေ အလွယ်တကူရှာမတွေ့ နိင်အောင် Hideလုပ်န်ိင်ပါတယ်
ကျနောတော့ Blogတခုထဲ ချန်ပြီး အကုန် ဖျက်ပြီးပါတယ် ကျနောက Main websiteအတွက် Pageခွဲတခု Sub-Page အနေနဲ့ သုံးရုံသတ်သတ်ပါ
Body Textပြင်ဖိူ့ အထက်ကပုံမှာ ပြခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ No.3 ကို Clickလိုက်ပါ
စာသားတွေကို Selectပေး ပြီး Deleteလုပ်ပြီး မိမိစာသားကို ဖြညိ့စွက်ရေးသားလို့ရပါတယ်
ပီးရင်တော့ Saveပေါ့ ကျန်တာတွေ ကလိ ကြည့်ပါဦး
အခု တခြား Articleတွေ ထည့် ဖို့ ပြောပါမယ်
ပုံထဲက အတိုင်း More>Social>Facebook Page Pluginကိုရွေးပါ
ပြီးရင် ပုံ ပြထားတဲံအတိုင်း Facebook page Link ဖြည့်ပြီး ok ပေးပါ
ဒီလောက်ဆို အားလုံး အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ဆက်လက် ကလိနိင်ကြပါစေဗျာ
ယခု ခဗျားတို့နဲ့ အတူ လုပ်တဲ့ ဆိုဒ်ကတော့
http://95blogger.webnode.com/ ပါ အစမ်း ကြည့်ကြည့်ပါ
အခုပြောပြမယ့် ဆိုဒ်လုပ်နည်းကwix ဆိုတဲ့ Free Hostကနေလုပ်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်
ဆိုဒ်ကို Publishလုပ်ပုံ အထိဘဲ ရေးသားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်နည်းတွေကို Postတခုချင်းစီရေးသားပေးပါ့မယ်
မိမိ websiteအတွက် Catigoryတခုကိုရွေးပေးပါ
ရွေးပီးရင် Go ကို ကလစ်ပါ ပီးရင် Templateရွေးရမယ့်အဆင့်ရောက်ပဲါပီ
Templateတခုကိုရွေးလိုက်ပါ Editကို နှိပ်ပီးတော့ပေါ့
Templateရွေးပြီးလျင်အောက်ကအဆင့်မှာ ခန ကြာတတ်ပါတယ် ၃မိနစ်လောက်စောင့်ပါ
အခုတော့ဆိုင်္ဒကို မိမိရွေးထားတဲ့ Templateပေါ်မူတည်ပြီး ပြင်ဆင်လို့ရပါပီ အခုကျနောရွေးထားတဲ့
Templateနဲ့တော့ မတူလောက်ပါဘူး ဘယ်ဟာက ဘလိုဆိုတာ ရှင်းပြပါဦးမယ် အခု သင်ဖတ်နေတဲ့ website ရေးဆွဲနည်းပိုစ်က ဆိုဒ်တခုရအောင်အထိဘဲရေးသားမှာပါ နောက် ပိုစ်တွေမှ ဆိုဒ်မှာ စာရေးမယ်
ပုံတင်မယ် Slide Show ထည့်မယ်စတဲ့ ပြင်ဆင်နည်းတွေရေးသားပေးပါမယ်
အပေါ်ပုံကိုကြည်ပါ မိမိရွေးထားတဲ့ Templateကို ပြင်ဆင်ဖို့ toolsတွေနဲ့ အသင့်စောင့်နေပုံကိုတွေရပါမယ် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ ဦး Siteကို အရင်ဆုံး အတည်ဖြစ်အောက် Publish
လုပ်လိုက်ပါ နောက်ပြင်ဆင်မယ့် အဆင့်တွေကို ပြောပြပါမယ် မိမိ စိတ်ကူး ရှိတယ်ဆိုလဲ ပြင်ဆင်ကြည့်ပါ
Publishကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါ အတိုင်း သင့် websiteလိပ်စာကို ဖန်တီးခိုင်းပါ
လိမ့်မယ် သူအောက်မှာ နမူနာ ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ရေးလိုက်ပါ
ဆိုဒ်Name ရေးပီးရင်တော့ Publishမလုပ်ခင် မိမိ websiteကို တခြားလူတွေ ကြည့်ရှုလို့ရအောင် Domainရေးခိုင်းပါတယ် Domainက ဘာလဲ ဆိုတာကို လဲ ကျနော ရှင်းပြထားပါတယ်
ကဲပိးပါပီး Save and Continueကို နှိပ်လိုက်ပါ
1. Best Footer Design FOR Wix user
2. Header Imageကို Fixedထားခြင်း
အတီးအတဖြစ်နေရင် နိုင်ငံတော်ပဲ နစ်နာမှာ--။
သာမန် အဖေသေလို့ သားမင်းဖြစ်တာ---။
မင်းပြောင်းမင်းလွဲတွေမှာက နဂိုရှိရင်းရာထူးကနေပြုတ်တာရှိသလို ထပ်မြင့်သွားတာလည်းရှိတယ်----'။
ဘယ်လိုပဲနေနေ နေရာရလာတာက တက်လာတဲ့ဘုရင်မင်း မင်းသားဘဝက
အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ အိမ်တော်ပါ ငယ်ကျွန်တွေပဲ။
အဲဒီအပေါ်မှာ ဘိုင်ဆပ်ကို မြို့ဝန်ထပ်ခန့်ခဲ့တယ်--။
ပုဂံမင်းမှာက မင်းသားဘဝထဲက ခါတွေချိုးတွေအကောင်ပလောင်တွေမွေးတဲ့ ဝါသနာကရှိတော့ ဘိုင်ဆပ်ကလည်း အဲဒီ
ဘုရင်ကလက်ခံပြီး မြေခွေးပုရစ်တွေ မြို့အနှံမှာရှာစေတယ်----။
တစ်ခုလုပ်ရင် အလုပ်ငါးခုလောက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ ဥာဏ်တွေပါထွက်လာတယ်---။
မြန်မာတွေမှာက ရှေးခေတ်က ဘဏ်တွေမရှိသေးတော့
အိမ်အောက်တွေမှာပဲ အိုးနဲ့ ရွှေတိုရွှေစ
က ကိုယ့်အိမ်ကိုမရှာအောင် လဘ်ထိုး---။
မသေမြို့ကြီးမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ဒီနှစ်ယောက်လုပ်လို့ ပူဆွေးရ၊ငိုကြွေးကြနဲ့
ဘုရင် ဒေါသထွက်မှာစိုးလို့ မလျောက်ရဲကြဘူး---။
အဲဒီအချိန်မှာ ဘိုင်ဆပ်က သူနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေ ဂုန်းချော၊တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေပြော အဲလောက်ထိကို
မင်းသားကြီးတွေမှူးမတ်တွေမှာ ဘုရင်နဲ့တွေ့ဖို့ ဘိုင်ဆပ်ဆီ သတင်းအရင်မေးရလောက်အောင် တန်ခိုးထက်လာပါတယ်---။
ဘိုင်ဆပ်က ဘုရင်ကိုလျောက်ပေးနဲ့ အာဏာကလည်း ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
အမှုဖြစ်ရင် ဘိုင်ဆပ်ဆီ အရင်ပြေးကြတော့တာပဲ။
တစ်နေ့ရောက်တော့ ငပိန်က အင်းဝမြို့ဟောင်းကြီးကိုသွားပြီး သတိရတော့တယ်။
မြို့ဟောင်းကြီးကနေ သူတို့အတွက် ဘာရနိုင်လဲပေါ့--။
တော်တော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တော့ ဖန်နန်းရှင် ဘွဲ့ကိုတောင်ရခဲ့တာပါ--။
ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြစရာနန်းတော်ကြီးတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အင်းဝနန်းတော်ကြီးက ဘိုင်ဆပ်နဲ့မောင်ပိန် လက်ချက်ကြောင့် နန်းဆောင်တွေပျောက်ခဲ့ရတာ။
မန္တလေးနန်းတော်ကြီးက မဟာမိတ်တပ်တွေလက်ချက်ကြောင့် ပြာပုံဖြစ်ခဲ့ရတာ-။
အင်းဝနန်းတော်ကြီးမှာက ကျွန်းတိုင်ပေါင်း ထောင်ကျော်တယ်။ကျွန်းသားပျဉ်ခင်းတွေက ထုလေးလက်မရှိတယ်။ဒီဟာတွေကို မောင်ပိန်က မျက်စိကျပြီး သူ့ဆရာဘိုင်ဆပ်ကို ဘုရင်ဆီ လျောက်ခိုင်း။ဘယ်လိုလျောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့------
"တစ်ဘက်ကမ်းက ဘိုးတော်ဘုရားကောင်းမှုကျောက်တော်ကြီးဘုရားနဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းက ဘကြီးတော်ကောင်းမှု ပုထိုးတော်ကြီးဘုရားကို တိုင်းသူပြည်သားလွယ်လွယ်ကူကူဖူးရအောင် တံတားဆောက်ချင်ပါတယ်"တဲ့----။
ဖျက်စေဆိုတော့ ဘိုင်ဆပ်တို့ မောင်ပိန်တို့ တပည့်တွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီး လှော်ကြတော့တာပေါ့---။
ခနနဲ့ စုတေပြီး ဘဝပျက်တော့တာပဲ---။
လက်ရှိ တောင်သမန်တံတားနေရာရောက်လာတဲ့ တိုင်တွေကတော့ တိုင်ပိန်တိုင်ညောင် ပျဉ်ပိန်ပျဉ်ညောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်-----။
ဒါကြောင့်လူငယ်တွေ တံတားကိုရောက်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်၊လမ်းလျောက်၊ဂုဏ်ယူတာကယူပါ--။
၁ ။ ည၆ နာရီနောက်ပိုင်းမှာသောက်ပါ ည၁၀ နာရီလောက်ဆို တော်သင့်ပါပြီ အိပ်ချိန်အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်ပမာဏ ယူသင့်ပါတယ်
၂ ။ အမြည်းများများစားပေးပါ အမြည်းကသင့်အစာအိမ်အတွက်အကာအကွယ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ
၃ ။ ရေများများရောပါ ရေကအရက်ကြောင့်ရင်ပူခြင်းနဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမဲ့အရာများကိုခြေဖျက်ပေးပါလိမ့်မယ်
၄ ။ မကြာခဏဆီးထသွားတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါ ဆီးသွားမှကျောက်ကပ်ထဲက အဆိပ်ပမာဏနဲနိုင်သမျှနည်းအောင် လုပ်ယူလို့ရမှာပါ
၅ ။ ရေခဲသုံးပါ ရေခဲက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူကိုခဏမျှသက်သာစေလို့ပါ
၆ ။ အစာကြေလွယ်သော အမျှင်ဓါတ်ပါသောအစားအစာများကိုသာမြည်းပါ အကြောင်းကတော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ဝမ်းသွားလျှင် ညပိုင်းစားထားသမျှတွေ စွန်ပြစ်စေချင်လို့ပါပဲ
၇ ။ မနက်ပိုင်းအရက်သောက်တက်သောအကျင့်ကိုရှောင်ပါ တကယ်လို့သောက်နေပြီဆိုရင် အရက်စွဲရောဂါဖြစ်နေပါပြီ ကုသမှုကိုခံယူပါ
အရက်စွဲနေရင်တော့ . . .
ဗီတာမင် ဆေးသောက်ဖို့လိုသလို ဆီးရောဂါမဖြစ်အောင် ဆီးအောင့်ထားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ဆီးနည်းခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဖြစ်စေရပါ။ အရက်စွဲလာပြီ ဆိုရင်တော့ အရက်ဖြတ်ဆေး သောက်ဖို့လို တယ်။ များသောအားဖြင့် စီပီဇက်သောက်ဆေး နှစ်လုံးကို နှစ်ကြိမ်နဲ့ အိပ်ဆေးဗေလီယံ တစ်ခုခု နှစ်လုံးတွဲ သောက်သင့်တယ်။ အချိန်ပိုနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေး လိုက်စားခြင်း၊ အားကစား သို့မဟုတ် လူမှုရေး အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေသင့်တယ်။ အစားအစာ ပုံမှန်အားဖြင့် အရက်မှာပါတဲ့ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများဟာ ရေဓာတ် ဆုံးရှုံးစေပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီတွေ အသည်းမှာ စုစေတယ်။ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရော မြင့်စေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်စေတယ်။ အရက်ဖြတ်ရင် သဘာဝသစ် သီး ဖျော်ရည်၊ သံပရာ၊ လိုင်းဂျူးစ်၊ စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည် သောက်သင့်တယ်။ ပန်းသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥဝါ၊ တရုတ်နံနံ၊ သကြားဓာတ် ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည် သောက်သင့် တယ်။ သွေးထဲ မှာ ဂလူးကို့စ်နည်းရင် သကြားဖြည့်ပေးရမယ်။ အကြံပြုချက် အရက်ဟာ ကောင်းကျိုးထက် အရက်စွဲခြင်း၊ ရောဂါစွဲကပ်ခြင်း စတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများတဲ့အတွက် တတ်နိုင်ရင် မသောက် ဘဲ နေ သင့်တယ်။ အရက်ဖြတ်မယ်ဆိုလည်း စနစ်တကျ ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး ကုသသင့်တယ်။
Facebook အကောင့် လော့ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ
ကိုယ်တွေ့ပါ။ Friend ဇွတ် Add ရင်လည်း Facebook က သူငယ်ချင်း Add ခွင့်ကို ရက်အတော်ကြာကြာ ပိတ်ပါတယ်။ နောက် မထင်ရင် မထင်ရင် သလို Message ပို့ခွင့်ပါ ရောရောင် ပိတ်ပါတယ်။
အပေါ်က ပြောတဲ့အထဲကလိုပဲ ပိတ်တတ်သလို၊ Page တွေ၊ မသိတဲ့ သူတွေ ဆီကို စာဇွတ်ပို့ရင်လည်း Facebook က စာပို့ခွင့်ကိုပါ Block လုပ်ပါတယ်။ ယခုက Mutual friend တွေကိုလည်း message ပိုတဲ့ feature ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒါကို ၃ ယောက်အထက်လောက် ပို့မိရင် Lock ကျနိုင်ချေ များသွား ပါပြီ။
ယခု Facebook ရဲ့  Feature သစ်အရ mutual friend တွေကိုလည်း tag လုပ်လို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၃ ယောက်ထပ် ပို Tag မိရင် Tab လုပ်ခွင့် ၁၅ ရက် အပိတ်ခံရပြီး အပိတ်မခံချင်ရင် security question ကိုဖြေရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မှားရင်တော့ Lock ကျပါပြီ။
ဒီတခါတော့ ကျနော် လွန်တာပါ (Myothaw Emc)
အင်တာနက်ကို စသုံးပါပြီ ဆိုကတည်းက ပထမ ဆုံး စသုံးတဲ့အရာက များသောအားဖြင့် Gtalk ဆိုတဲ့ program ပါ။ ယခု ဆို မြန်မာနိင်ငံမှာ ၇ တန်း ၈ တန်းအရွယ်က အစ သုံးနေပြီ။
မဖြစ်နိင်ဘူးလို့ မပြောနဲ့နော် လက်တွေ့ ကြူဖူးလို့ ပြောနေတာ။ ပြောချင်တာကဒီလိုဗျ။
ကျွန်တော်က အခုပထမ နှစ် ၊ ကျွန်တော် ၉တန်းကတည်းက gtalk ကို စသုံးတာဆိုတော့
အခု ၃ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပီ။စစ သုံးချင်းကတော့ အရူးအမူဘဲ ကိုယ့် အကောင့် ဆီ တယောက်လောက် လာအပ်ပီဆိုရင်ကို ပျော်နေတာ။သုံးခါစ ၁နှစ် ၀န်းကျင်လောက်တုန်းက
ဆိုအရမ်းကြူတာ။အခုတော့အဲလိုကြူတဲ့ဘက်သိပ်စိတ်မပါတော့ပါဘူး။ကိုယ့်အကြောင်းကြည့်ဘဲ ပြောနေလို့ ဖတ်ရတာ မကောင်းဘဲ ဖြစ်နေတော့မယ်။
ဒါပေ့မယ့် အခု အရင်က ကြူခဲ့ သမျှက အဖတ်တင်နေပီ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က အထိ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းမှာ ရည်းစား ၃၄ ယောက်ရှိပါတယ်။(သုံး၊လေးယောက် မဟုတ်ပါ။၃၀+၄=၃၄ယောက်ပါ။)အပြင်မှာတော့ အိမ်ကို ကြောက်လို့ မထားရဲ ပါဘူး။၃၄ ယောက် ဆိုလို့ လန့်မသွားနဲ့ဦးနော် ။ကျွန်တော်ကဘဲ ကောင်မလေးတယောက်ထဲကို နာမည် ၃၄ မျိုးနဲ့ ကြူတာလေ ဟိဟီး။ကျွန်တော်ကို လွန်တယ်ပြောကြမယ် ထင်တယ် ။
ကျွန်တော်မလွန်ပါဘူး အဲ့ကောင်မလေးကိုက ကျွန်တော်ကြူသမျှ အကောင့် ကုန် နာမည်မတူတာ ကုန်လုံးကို ချစ်တယ်လို့ အဖြေ ပေးထားတာဗျာ။ ဒါပေ့မယ့် အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ အင်တာနက်မှာ ရည်းစားသာဖြစ်ခဲ့တာ ရင်ခုန်စရာ တစက်ကလေးမှ မကောင်းပါဘူး။မကြာပါဘူး ကျနော် နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက် ကို ကြူလို့ရခဲံ့ပါတယ်။ သူနဲ့ မှ အကြူသန်တဲ့ ကျနော် ထိတော့တာဘဲ။
Chitting ဓလေ့စရိုက်အရတော့ စစခင်ချင်း အင်တာဗျူး တခုဖြေရလေသလား
အောင့်မေ့ရအောင် သူရော ကျနော်ပါ အမေးအမြန်းထူခဲ့ကြတယ်။ အိမ်ဘေးက ဈေးသည်
လင်မယား ရန်ဖြစ်တာ၊ အစ်မ ယောက်ျားရတာက အစ စကားလုပ်ပြီးပြောခဲ့ကြတယ်။
ဒီတခါလဲ ကျနော် မလွန်ပါဘူး သူဘက်ကစပြီးတော့ ရေလာမြောင်းပေးစကားစပြောတာပါ။ ကျနော်လဲ မိန်းကလေးဘက်ကစပြောတော့
မူမနေတော့ပါဘူး။ ရက်ပိုင်းမှာဘဲ ကျနော်တို့ chitting ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာဘဲ ကျနော် ၃၅ ယောက်မြောက် ရည်စားရပါတယ်။သတိရရင် အွန်လိုင်းလာပြီးတော့ chat တယ်။ရုပ်မြင်ချင်တော့ skype နဲ့ ချက်တယ်။ရုပ်ရည်ကတော့ မြင်နေကျတွေ့ နေကျ ကောင်မလေးတွေနဲ့ မတူအောင်ကို ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေ့မယ့် သူရဲ့ အသံကိုကြားရဖို့တော့ ခက်သွားပါတယ်။
ဖုန်းနိပါတ်တောင်းတယ်၊သူကတော့ မပေးချင်ဘူး။ ဖုန်းနိပါတ်တောင်းတိုင်းလဲ သူက စုံစမ်းတုန်းလို့ဘဲ ပြောတယ်။ တရက်ကျ သူကျနော့်ကို ပြောတယ်။
“ငါ စာမေးပွဲဖြေရတော့မှာ မလို့ အရင်လို အွန်လိုင်းတက်ဖြစ်မယ် မထင်တော့ဘူး၊နင့်ကိုငါမရှိလဲ အခြားသူနဲ့ဘဲ chat ပါ၊ ငါကို အရင်လို စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့တော့”
“မတွေ့ရလည်း အသံတော့ ကြားချင်ပါတယ်၊ ဖုန်းနိပါတ်ပေးခဲံပါ”
“နောက်ရက် massage ချန်ထားမယ်၊ဖုန်းနိပါတ်က နင်တောင်လို့ပေးတာနော် ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့”
သူချန်ခဲ့တဲ့ Massage ကို ကျနော်ရပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ဖုန်းနိပါတ်နဲ့ နှုတ်ဆက်စကား တချို့ပါ
ပါတယ်။ ကျနော်လဲ သူဖုန်း နိပါတ်ရတာနဲ့ ပျော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီ ဖုန်းနိပါတ်ကို ဒီနေ့ မဆက်ပါနဲ့၊နောက်တနေ့မှ ဆက်ပါတဲ့။ ကျနော် ထင်ပါတယ် အဆောင်ဖုန်းမလို့ချက်ချင်းမဆက်ခိုင်းဘဲ အချိန်ဆွဲချင်နေတယ်လို့။ နောက်တနေ့ ညနေ ကျနော် ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ၂ခါလောက် ဖုန်းမကိုင်ပါဘူး။ နောက်တခေါက်ထပ်ဆက်တော့ ဦးလေးကြီးအရွယ် လူတယောက် ဖုန်း ပြန်ဖြေတဲ့ အသံကို ကြားရပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့…. လပြည့်နဲ့ စကားပြောချင်လို့ပါ”
“အော်အေး အေး လူ စရင်းကြည့်ပေးမယ်နော်” “ဟုတ်ကဲ့”
“ငါ့တူ လူစရင်းထဲတော့ ငါ့တူ ပြောတဲ့ ကောင်မလေးနာမည်မပါဘူး၊ လူပျောက်တိုင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေရော ရှိလား၊ ရှိရင် ငါ့တူ ကိုယ်တိုင် လာပြီး အပ်ရင်တော့ရတယ်။”
“ဗျာ….!!!!!!! ကျနော် ပြောတဲ့ ကောင်မလေးက မနေ့ကတောင် ကျနော်နဲ့ တွေ့ပါသေးတယ်၊
သူစာမေးပွဲဖြေမယ်ဘဲ ပြောသွားတာ၊ ဘယ်မှသွားမယ်လို့ မပြောသွားပါဘူး၊ဦးရှာပေးမယ့်
ကောင်မလေးက ကျနော့်ချစ်သူ ခင်လပြည့်ဝန်း ဟုတ်ပါတယ်နော်”
“အေးလေ မင်းပြောတဲ့ နာမည် ငါရှာတာဘဲလေ၊ ဒီနေ့မှ အသစ်ရောက်လာတဲ့ အထဲတော့ မကြည့်ရသေးဘူး ခဏ” “ကြည့်ပေးပါဦးဗျာ” တအောင့်လောက်နေရော…..
“ ငါ့တူ ဒီနေ့ အလောင်း ၂ခုေ၇ာက်တယ် cycle accident နဲ့ကွ တယောက်က မျက်နှာကို ကောင်းကောင်းမ၇ှိတော့ဘူး၊ ၂ယောက်လုံးက ယောက်ျားလေးတွေကွ”
“ခဏ…ခဏ၊ အခု ဦးက မန္တလေး က ဟုတ်တယ်မလား” “အင်း”
“ ခင်လပြည့်ဝန်း ရဲ့ အိမ်နားက မဟုတ်ဘူးလား”
“ ငါ့တူပြောတဲ့သူကို ဦးလေးမသိဘူး ငါ့တူက ဘယ်ကို ဖုန်းခေါ်တာလဲ မန္တလေးတော့ ဟုတ်ပါပြီ။” “လပြည့် ကိုလေ”
“ အခု ငါ့တူ ဆက်နေတဲ့ ဖုန်းက ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲ ရုံက ရုံမှုး ဆရာဝန်ရဲ့ အခန်းကဖုန်းကွ” “သေစမ်း ဘာလို့ ရင်ခွဲ ရုံရောက်သွားတာလဲ”
ဒီတခါတော့ ကျနော် လွန်ပြီ ထင်တယ်။ရေဝေးက သဂြိင်္ုလ် စက် ကို ရောက်မသွားတာကံကောင်းမယ်။
လူဝကြီးတစ်ယောက်ဟာ ဝိတ်ချချင်တာကြောင့် ကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို မေးပြီး (၅) ရက်ကို (၁၀) ပေါင် ဝိတ်ကျစေတဲ့ လေ့ကျင်...
Webs နဲ့ website လုပ်နည်း
သဲချင်းတို့ သဇင်လေး အရင်ကဆိုဒ်လုပ်နည်းတခုတင်ခဲ့ဘူးပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ weeblyနဲ့လုပ်တာပါ ဒါကတော့websနဲ့ေ၇းတာ အင်တာနက်ဆိုင်သွားတိ...
My New Blog 95Blog
Powered By | 95Blogger Via Present 95Blog Team
© 2011 ရွှေမင်းသမီး | Home | Facebook -
Designs by 95Blog | thazinlay
Find me on facebook - 95Blogger